Ethiopia oo ka hor timid soo jeedin Sudan oo ahayd in arrinta biyaha wabiga Nile ay ka wada xaajoodaan. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ethiopia oo ka hor timid soo jeedin Sudan oo ahayd in arrinta...
Ethiopia oo ka hor timid soo jeedin Sudan oo ahayd in arrinta biyaha wabiga Nile ay ka wada xaajoodaan.
sidoo kale arintaan ayaa ku soo aadaysa Xili mudooyin kala Duwan ay ay fashil ku dhamaadeen waan waantii laga dhex waday dalalka Ethiopia, Masar iyo Sudan.
Previous articleAbiy Axmed oo ka codsaday Afrika inay ku taageeraan howlgallada sharciga iyo kala dambeynta loogu soo celinayo Itobiya
Next articleMidowga musharaxiinta oo ka hadlay arrimaha amniga, shirka la filayo inuu ka qabsoomo Muqdisho iyo xanuunka safmarka ah ee Covid-19.
Amnesty International oo ugu baaqday Puntland in ay sii dayaan Wariye...